Wasaaradda Waxbarashasda iyo Tacliinta sare oo Tababar seddex Maalmood u soo xirtay Qayb ka mid ah shaqaalaheeda Xarunta dhexe. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ November 26, 2017
26/11/2017- Tababarkaan ayaa waxaa loo qabtay shaqalaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowlada Puntland waxaana uu ku saabsanaa Maaraynta Musiibooyika Waxbarashada waxaana uu kamid yahay mashruuca Waxbarashada deg deg ah oo Wasarada iyo hay’addaha kala ah Save The Children iyo UNECEF bahwadaag ku yihin.
Agaasimaha Waaxda Waxbarshada Tooska ah Murwo Maryan Jaamac Xuseen ayaa waxaa ay sheegtay tababarkaan uu kaabayo mashruuca Emergancy Education oo ah mashruuc deegaanka lagu ilaaliyo waxaana masuuliyiinta labarayay qaabka ay xalin karaan khilaafaadka ka shaqaynta Dugsiyadda.
Murwo Maryan Jaamac Xuseen ayaa waxay sheegtay in shaqaalaha tababarka qaadanaya in looga bahan yahay in casharadaan ku shaqeeyaan madama wasaaradu shaqalaheeda shaqada lagu Tabbabaray macluumad badan oo faaiido u leh waxtarka waxbarashada..
Wasaaradda Waxbarsahada iyo Taclinta sare ee dowlada Puntland aya waxay gaarsiisay gurmadyo kala duwan loona sameeyo biyo dhaamis iyo cuno la gaarsiiyey Goobaha waxabarsahada ee fog fog.
Ku simaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare C/qaadir Yuusuf Nuux oo Tababarkan 3 maalmood soo xiray ayaa ka hadlay ayaa yiri in la fahmo yaraynta khataraha ku saabsan ama ka dhicikara iskuulada,
Waxaa kalo yiri waa in la ogaado Muhiimada ay leedahay in caruurta lala yeesho macaamilo toos ah in la sheekaysto lalana fariisto.
In caruurta laga wacyigaliyo khataraha ku imaan kara
In aan iskuul laga dhisin meel aan ku haboonayn oo khatari ka imaan karto.